Daawo Sawirada Gabadh aan Muslimad ahayn oo dhakhtar u soo qoray in ay xijaab xidhato. | Salaan Media
Home Community Daawo Sawirada Gabadh aan Muslimad ahayn oo dhakhtar u soo qoray in...
Daawo Sawirada Gabadh aan Muslimad ahayn oo dhakhtar u soo qoray in ay xijaab xidhato.
Gabadh reer Manchesterah oo lagu maacaabo Dennis Queen, waa 40 sano Jir ah ayaa waxa haleelay Xanuunka loo yaqaan Cun cunka ama Allergic waxa ay haatan tahay mid ku qasban inay xidhato xiliyada ay banaanka tagayso xijaab si ay uga nabad gasho Qoraxda oo ah mida ay cudurka ka qaaday waa sida uu dhaqtarku iyada u sheegay.
Sheekadan Oo ah mid aad usoo jiidatay indhaheyga ayaa waxaa boga hore ku qoray mid kamida Wargeysyada Ingriiska kaa oo lagu magacaabo dailymail iyadoo warbixintan ay ka sheekeyneyso Gabadh udhalatay wadanka Ingriiska isla markaana ah Gabadh Haysata Diinta Kristanka ay qasab ku noqotay inay Xijaabato kadib markii dhakhtarkeedu u sheegay in Caafimaadkeedu uu ku jiro inay xijaabato sida Gabdhaha Muslimaadka ah.
Ugu Danbayntii Arintan OO arin si aad ah kuu farxad galineysa marka aad si qoto dheer u eegto waxana ay cadeyneysaa In Diinta Islaamku tahay mid wax waliba oo maanta caalamku baadhitaano ku soo saaraan uu hore Qur’aanka Kariimka ah uga hadlay, waxana ayaan daro ah in Gabadh Heysatada Diinta Kristanka ay Xijaabato halka Gabdho ku dhashay Diinta Islaamkana ay Jirkooda Qaawinayaan.